Salaada Tarawiixda bisha Ramadana oo qayb ka ah caafimaadka qofka (Daraasad) – SBC
Salaada Tarawiixda bisha Ramadana oo qayb ka ah caafimaadka qofka (Daraasad)
Inkastoo ay tahay cibaado muhiim ah inta lagu gudajiro bisha barakeysan ee Ramadaan oo wax kasta oo wanaag ama cibaado ALLE ah oo aad la timaado isla markaana ay kuu laba jibaarmayso ayaa salaada Taraawiixdu waxay ka mid tahay arimaha ugu waa weyn ee cibaadada bisha barakeysan ee Ramadaan.
Tukushada salaada Taraawiixda waxaa kaloo ku lamaansan arimo caafimaad sida ay cadeeyeen quburo dhanka caafimaadka ku xeeldheer oo soo saarey daraasad cusub.
Aqoonyahanadan ayaa sheegay in tukushada salaada Taraawiixda ay ku jirto xikmad muhiim ah oo dhanka caafimaadka ah taasi oo ah in dhaqdhaqaaqa xubnaha jirka ay tahay mid ahmiyad u leh caafimaadka qofka bini’aadamka ah gaar ahaan lafaha, socodka ama wareega dhiiga, sidoo kale waqtiga dheereedka ah ee qofku uu taagan yahay inta lagu jiro salaada Taraawiixda ayaa daraasadan cusub waxay ku sheegtey mid ahmiyad u leh caafimaadka.
Dr. Mohamed Antar, oo ka mid ah aqoonyahanada Jaamacada magaalada Banha ee gobolka Qalyubia ee dalka Masar ayaa sheegay in dhaqdhaaqa jirka uu sameynayo marka qofku uu ku jiro salaada sida suujada & rakuukaca ay tahay mid faa’ido weyn u leh lafaha qofka, sida gacmaha, garbaha, qoorta, murqaha, faraha, suulasha & kala goysyada.
Xiliga lagu jiro salaada ee qofku uu taagan yahay ayaa la sheegay in ay faa’idu u tahay lugaha qofka gaar ahaan dareerayaasha ama dheecanada ku jira kala goysyada sida jilbaha & murqaha.
Dhinaca kale Dr. Nagwa oo ah Professor ku takhukhusay daaweyntan kana tirsan jaamacada Qaahira isla markaana la taliye dhanka caafimaadka arimaha qoyska u ah wasaarada caafimaadka & dadweynaha Masar ayaa isaguna geestiisa sheegay in socodka qofka uu aado masjidka si uu ugu soo tukudo salaada Taraawiixda cunto cunida ka dib ay tahay jimicsi qofku u baahan yahay, iyadoo socodkaasi marka lagu daro dhaqdhaqaaqa jirka & nuuxnuuxsiga gacmaha & lugaha ay qayb weyn ka qaadato arimaha caafimaadka.
Cilmibaaristan waxaa kaloo lagu sheegay in sidoo kale dadka qaba cudurada sonkorta & dhiig karka ay faa’ido u leedahay tukushada salaada taraawiixda.